'बोल्दै जाँदा जिब्रो चिप्लियो होला तर राष्ट्रियताप्रतिको सम्मानमा म अलिकति पनि चुकेकी छैन' | My News Nepal
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री तथा नेपाली चेली मनिषा कोइरालाले ‘हाई हाई’ पाइरहेका बेला नेपालमा अभिनेत्री वर्षा राउत भने विवादमा आएकी छन् । हालैमात्र नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक नक्साको सन्दर्भमा दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर वर्षा विवादित बनेकी हुन् । उनले नेपाल र भारतको सम्बन्ध नेपाली र भारतीय पत्रकार भड्काउन खोजेको आशयको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । जुन भिडियो क्लिप्स सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
वर्षाले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा रास्ट्र र रास्ट्रियताको विषयमा बोल्दै उनले भारतीय आफ्नो फ्यानसँग फेस गर्न गाह्रो भइरहेको बताएकी छन् । नेपालमा भारतसँगको सीमा विवाद चरम उत्कर्षका पुगेको बेला एक कलाकारले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल आक्रोशित भएका हुन् । केही दिनअघि मात्र बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री मनिषाले नेपालले जारी गरेको नक्साको सपोर्ट गर्दै ट्विट गरेपछि उनी भारतमा विवादित बनेकी छन् भने नेपालमा वाहवाही पाइरहेकी छन् । यो सामान्य हो कि एक नेपालीले पक्कै पनि नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा बोल्न पाउ“छ । र, उनी भारतमा आलोचित हुनु पनि सामान्य नै हो । तर, नेपाली अभिनेत्री, जो नेपालमै संघर्षरत छिन्, उसले नेपाल सरकारनै कदमको विरोध गर्नु कति उचित हो ? त्यो वर्षाले पनि बुझेकी हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक भएको वर्षाले अन्तर्वाता भिडियोमा भनेकी छन्, ‘देशको माया लाग्छ भन्दैमा यो हाम्रै हो तिमीहरूले किन यस्तो गरेको भनेर झगडा गर्ने कुरा होइन । यो त टेबल टक गरेर यताको सरकार र उताको सरकार मिलेर गर्ने कुरा हो । यहाँ त दुवैतर्फका पत्रकारहरू मिलेर झगडा पारिरहेका छन् ।’ यही विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनी ट्रोल बनेकी छन् ।
आफ्नो अभिव्यक्तिले रातारात विवादित बन्दै गएपछि वर्षाले माफी मागेकी छन् । ‘टेबुल टक गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा नेपाल र भारतका मिडियाले विवाद बढाएको’ भनेर अभिव्यक्ति दिएकी उनले माफी माग्दै गलत नहोस भन्दै खबर्दारी गर्न खोजेको बताएकी छन् । उनले फेसबुकमा एकाउन्टमा लामो स्टाटस लेख्दै माफी मागेकी हुन् ।
यी अभिनेत्रीले अगाडि लेखेकी छन्, ‘संसारको कुन नागरिकलाई आफ्नो मातृभूतिप्रति माया हुँदैन होला र ? त्यसमाथि नेपाली कलाकार भनेर हाम्रो त पहिचान नै देश र राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ । आफ्नो परिचयलाई नै अंगिकार गर्न सक्ने यति ठूलो र महान् सम्मानलाई म उच्च ओहोदामा राख्छु । म नेपाली हु“, मलाई गर्व छ ।’
तर, अभिनेत्री वर्षाले अन्तर्वातामा बोल्दा नेपाली कलाकार भएर पत्रकारलाई दोष दिन खोजेकी छन् । उनको ती अभिव्यक्ति अहिले पनि यु–ट्युबमा हेर्न पाइन्छ ।
साथै, उनले आफूलाई विवादबाट छुटकारा पाउन आइतबार माफी मागेकी छन् । उनले माफी माग्दै अगाडि लेखेकी छन्, ‘हाल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसम्मको भूमिलाई समेटेर जुन नक्सा जारी भयो, त्यो हाम्रो भूमि हो र नेपाल सरकारले जुन कर्तव्यनिष्टता देखाएको छ, म त्यसको समर्थनमा अग्रपंक्तिमा उभिन तयार छु । तर यो मजस्तो एउटा व्यक्ति, एउटा नागरिकमात्रले समर्थन गरेर हुँदैन । हामी सबै नेपाली सँगै उभिएर समर्थन गर्नुपर्छ । समर्थन गर्नुपर्छ वार्ता गर्ने उचित वातावरणको, समर्थन गर्नुपर्छ तथ्य र सत्यको, समर्थन गर्नुपर्छ हामी दुई छिमेकीको प्रगाढ सम्बन्धको, समर्थन गर्नुपर्छ हाम्रो रोटी–बेटी सम्बन्धको र सबैभन्दा धेरै समर्थन गर्नुपर्छ मानवता र मानवधर्मको । यस्तो संवेदनशील समयमा भड्काउ तत्वहरूले आक्रमण गर्न सक्छन्, दुई देशको अन्तरदेशीय सम्बन्ध बिगार्न सक्छन्, जुन कुरा भारतीय मिडियाले उचालेका केही शब्दहरुबाट देखिन थालेको छ । यस्तै असभ्य र असत्य पत्रकारिता हाम्रो मिडियाले पनि नगरोस्, मैले यही भन्न खोजेकी हुँ ।’
उनले फेसबुक बिज्ञप्तिमा अगाडि लेखेकी छन्, ‘नेपाल मेरी जननी जन्मभूमि हुन् । नेपाली सबै हामी दाजु–भाइ दिदी–बहिनी हौ“ । नेपाली चेली मनिषा कोइराला दिदीले भनेका कुरालाई जसरी गर्वका साथ मैले सेयर गरें त्यसरी नै नेपाली भावनालाई म खुसीका साथ प्रस्तुत गर्न सधैं तयार छु । मैले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कार्यक्रममा बोलेका केही शब्दमा हेक्का नभएकाले केही गल्ती बोले“ होला जसको सन्दर्भ टेढिएर गलत अर्थ लागे होलान् । यस्तो परिस्थिति खडा भएकामा म क्षमाप्रार्थी छु र अब आइन्दा यसरी बोल्दा पक्कै हेक्का राख्छु ।’ -प्रभाव दैनिक